မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXXVIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXXVIII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXXVIII
Posted by Kyaemon on Mar 5, 2017 in Business & Economics, Education, Think Different, Think Tank |6comments
၂၀၁၁ ခု စက်တင်ဘာလ ၃ဝ နေ့တွင် သမတဟောင်းဦးtသိန်းစိန်က
ယင်းကြောင့် တရုပ်သတင်းစာ China Daily က စီပီအိုင်CPI အကြီးအကဲ Lu Qizhou နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောပြီး၊
၂၀၁၁ ခုအောက်တိုဘာ ၃ ရက် နေ့ထုတ် China Daily မှာ၎င်း တွေ့ဆုံပွဲက အမေးနဲ့အဖြေတွေကို
မြန်မာအစိုးရ က ၅၄ ဘီလျှံ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ( ၆၀. ရ %) ခွဲဝေရရှိမယ်ဆိုလို့ စီပီအိုင်ဥက္ကဌ Lu Qizhou ကပြောပါတယ်၊
၎င်းပြောပြချက်ကို ပေါ်လွင် အောင် ဇယားတွေကိုတဖန် ပြုစုပြီး ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့ ကိုးကားတဲ့စာစောင်တွေကိုပါ
(ကော်မရှင်လူကြီးတွေကစာချုပ်ကြည့်ခွင့်ရလို့ဇယားတွေကို လိုအပ်သလို စီစစ်ပြီးဝေဖန်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါကြောင်း)
China Daily Online News
မေး။ အချို့သတင်းစာမှာဖော်ပြသလို မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းဟာ တရုပ်နိုင်ငံကိုသာလျှင် အကျိုးအမြတ်တွေ
ဖြစ်ထွန်းစေတယ် လို့ထောက်ပြထားတယ်၊ ခင်ဗျားကဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမလဲ?
Q : Some reports pointed out that the project will only bring economic benefits for China . What ‘ s your comment on that ?
A : This viewpoint is extremely wrong . People who hold suchawrong viewpoint either don ‘ t understand the situation or have ulterior motives .
ဖြေ။ဒီလိုထင်မြင်ယူဆတာက လွန်စွာမှ မှားယွင်းနေပါတယ်၊အခြေအနေမှန်ကိုမသိ နားမလည်လို့ ဘဲဖြစ်နိုင်တယ်၊
ဒါမှမဟုတ် မလိုမုန်းထား ကောက်ကျစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြံအစည်ရှိလို့ဘဲဖြစ်နိုင်တယ်၊
Regarding infrastructure , it is an international practice to implement BOT mode .
အ ဆောက်အအုံကြီးလုပ်ပေးရာမှာကမ႓ာ့လုပ်ထုံးကBOT ဘီအိုတီ စံနစ်ကိုကျင့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်၊
ဘီ B က Build တည်ဆောတ်ပေး
အို O က Operate လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း(သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေး)
တီ T က Transfer (အထစ်အငေါ့မရှိ ချောမွေ့စွာ) လွှဲပြောင်းပေး
According to our BOT agreement , upon completion of the upstream-Ayeyawady hydropower project , CPI will be responsible for operation for 50 years , after 50 years the project will be transferred to the Myanmar government free of charge .
စီပီအိုင်က နှစ် ၅၀ အတွင်းမှာ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းဘို့တာဝန်ယူရပါမယ်၊
နှစ် ၅ဝ အပြီးမှာ ဒီစီမံကိန်းကြီးကိုမြန်မာအစိုးရကို အခမဲ့ လွှဲအပ်ရပါမယ်
…. Myanmar government will gain economic benefits of
USD54 billion via
free electricity and
far more than CPI ‘ s return on investment during our operation period . In particular ,
as the design life of the project is over 100 years,
when we transfer it after 50-year operation,
(နှစ်၅၀) လည်ပတ်ချိန်ကာလမှာ မြန်မာအစိုးရက
အခွန်ကောက်ယူခြင်း၊အခမဲ့ရေအား လျှပ်စစ် ဓာတ်အားရယူခြင်း၊အမြတ်ဝေစုရယူခြင်းဖြင့်၊
ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၅၄ ဘီလျံ တန်ဘိုးရှိ စီးပွါးရေးအကျိုးအမြတ်တွေကို ရယူခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
အထူးသဖြင့် နှစ် ၅ဝ လည်ပတ်ပြီးလွှဲပြောင်းချိန်မှာ ဒီစီမံကိန်း(ကရေကာတာတွေ)ကို (နောက်ထပ်)
နှစ် ၁၀ဝ ကျော် သက်တမ်း ရှိအောင် ဒီဇိုင်(အင်ဂျင်နီယာပုံစံ)ကိုရေးဆွဲပြုစုထားပါတယ်၊
the Myanmar government will haveafixed assets increase worth tens of billions US dollars,
(Burma will fully own the dam worth billions)
ဘီလျံ ဒေါ်လာ တန် ရေကာတာနဲ့စက်မှုပစ္စည်းတွေကို အခမဲ့ရအုံးမယ်။
hundreds of billions US dollars of direct economic benefits . Of course , the premise is that US dollar is not depreciated .
လွယ်ကူအောင် Asia Worldအပိုင်းကို စီပီအိုင်နဲ့စုပုံရောနှောထားတယ်၊
(စာချုပ်ကြည့်မှ တပ်အပ် သိနိုင်တယ်၊ Asia World တဘီလျံလို့ခန့်မှန်းရတယ်)
ပဌမ နှစ် ၅ဝ နောက်ပိုင်းမှာ စီပီအိုင်ကို တပြားတချပ်မှပေးဘို့မလိုပါ၊
မြန်မာကဘဲ ရဘို့ပါ၊ Asia World က ခါတိုင်းလို အနည်းငယ် ဆက်ရဘို့ရှိ
တစ်ဘီလျံ $ က တစ်ဂဏန်းနောက်မှာ “သုည ဝ” ၉ လုံးရှိတယ်၊
တစ် $ ကမြန်မာကျပ် ၁၃၀ဝ ရှိလို့တစ်ဂဏန်းနောက်မှာ “သုည ဝ” ၁၂ လုံး
ကျပ် ၁, ၃၀၀, ဝ၀၀, ဝ၀၀, ဝ၀၀
ရှိလို့ ကျပ် “ထရီလျံ Trillion” (တနည်း ကျပ် သန်းပေါင်း တသန်း)(သန်းပေါ်သန်းဆင့်)တယ်
ကာလအလိုက် မြန်မာရငွေ စုစုပေါင်းက ၅၄ ဘီလျံ $ က နေ ၂၃၄ ဘီလျံ $ တိုးတက်လာ
စီပီအိုင်က ၃၆ ဘီလျံ $ မှာရပ်တန့်နေမြဲပါ
MMTimes စာစောင်တခုမှာ စီပီအိုင်က ၃၅ ဘီလျံ $ ဘဲရမှာလို့ရေးထားတယ်
ပဌမ နှစ် ၅ဝ မှာ မြန်မာက ၆၀% စီပီအိုင်က ၄၀%ခွဲယူတာ မြန်မာကသာသာထိုထို ရှိနေပါတယ်၊
မလိုမုန်းထားနဲ့ ဂုံးချော မကောင်းပြောသူတွေရဲ့စကားကိုသွားယုံရင် ကိုယ်ကဘဲ ဆင်းရဲတွင်းမှာ
မရှိဆင်းရဲသူကို နစ်သထက်နစ်အောင် ဝါကူနဲ့ထပ်ထိုးမဲ့သူတွေကိုသတိထား ရမှာပါ၊
စီပီအိုင်ကအဝအပြဲ မလိုင်ခဲ ၉ဝ %ကိုတုတ်သွားတယ်၊ “ပိုလ်ကျ” သွားတယ်လို့စွပ်စွဲသူတွေအမှောင့်
ဒုတိယ နှစ်၅ဝကျတော့ (တနည်းနှစ်၁၀ဝ ကာလ မှာ မြန်မာ က ၈ဝ % စီပီအိုင် က ၂ဝ % ဆိုတော့
နှလုံးပီတိ ဂွမ်းဆီထိ ပေါ့ဗျား၊ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ?
နှစ်ပေါင်း ၁၅ဝ လဲပေါင်းကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာက ၈ရ % စီပီအိုင်က ၁၃ %ြဖစ်လာတော့
ဇယား ၃ ကို ဇ ယား ၂ ယှဉ်ကြည့်နိုင်တယ်၊ အလွှာလိုက်သီးသန့်ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ပါ၊
အလွှာလိုက်ဆိုရင် နောက်ပိုင်းအလွှာတိုင်းမှာ မြန်မာက ၁၀၀% စီပီအိုင်က “သုည ဝ” % ပါ၊
( တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ) သွယ်ဝှိုက်နည်းနဲ့အကျိုးပေး ခံစားခြင်း
In terms of indirect profits,
ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်း၊ရေကာတာ ကိုလည်ပတ်နိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း၊
အဆင့်မြင့် စွမ်းအားကြီးစက်တွေစက်ပစ္စည်းတွေ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွေ ကတဟုန်ထိုးခုန်ပျံကျော်လွှား
first of all, the construction and operation of high-grade and large-capacity power station will rapidly improve the power equipment in Myanmar and cultivatealarge group of professionals in power construction, operation and management. Asaresult, Myanmar’s electric industry will realize leapfrog development, providing strong power ensurance for its economic and social development.
ရေဘေးပြသနာတွေကို ထိရောက်စွာ ထိန်းနိင်မယ်၊
၅ နှစ်မှာ တကြိမ်ရေးကြီးခြင်း ကနေ အနှစ် ၂ဝ မှာ တကြိမ်ဘဲရေကြီးခြင်းဆိုတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းကို
Second, when Myitsone Hydropower Station is completed, it will effectively control and reduce the flood peak, raise the anti-flooding standard in downstream area, and reduce life and property losses caused by downstream flood on people living on both banks. The anti-flood capability of Myitkina will be enhanced from once in5years to once in 20 years.
၇၅ဝ ကီလိုမီတာ (၄၆၆ မိုင်) ရှည်လမ်းလုပ်ဖောက်
Third, 750km road andalarge number of hydrological, meteorological and seismic observation stations will be built for upstream-Ayeyawady project accordingly. Those infrastructures will definitely create opportunities for the local area to attract business and capital and improve people’s livelihood.
ရေကာတာ တည်ဆောက်ချိန်မှာ လူပေါင်း ၄၀၀၀ဝ လိုမယ်
ခုနေ ၃၄၀ဝ အလုပ် လုပ်နေ
Fourth, during the construction peak, more than 40,000 workers will be needed, considerably increasing local job opportunities. At present, there are altogether 2000 Myanmar workers on the construction site of upstream-Ayeyawady project, including 1400 Myanmar workers on the Myitsone Hydropower Project site. By directly participating in the construction of upstream-Ayeyawady project or providing relevant services for construction personnel, local residents have considerably improved their own economic and living conditions….
အခြားက ကိုးကား စာစောင်တွေ
Myitsone Dam – Wikipedia
Burmese government would earn about $54 billion by means of tax payment, power and shares, accounting for 60 percent of the total revenue of the Irrawaddy projects during the contracted 50 years, more than CPI’s return on investment during the fifty years Chinese operation period according to the President of CPI.
Mmtimes Online News
Myitsone developer releases excerpts of contract agreement
By Ye Mon | Wednesday, 22 June 2016
CPI also said that then-prime minister General Soe Win had been the one to invite them in 2006 to invest in Myanmar’s development by building the dam.
“During the negotiation process, more than 10 [Myanmar] ministries participated in the negotiations and reviews,” said the company’s statement.
It went on to say that according to the details in the contract, “During the project construction and concession operation period, the Myanmar government will obtainadirect economic benefit of US$54 billion by means of taxes, free power and share dividends, while the investor will obtain about $35 billion.”
…Based on the agreement, about 60.7 percent of the return on investment will go to Myanmar,
ဒါ အရင်အစိုးရ က အကျင့်ပျက်တယ်ပဲပြောရမလား
ဒီစီမံကိန်းရဲ့ဝင်ငွေ ဒီလောက်ရှိပါတယ်။ ဒီငွေတွေကို
ကချင်နဲ့ စစ်ရပ်စဲရေး လုပ်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်။ကချင်ကိုလဲ
မြစ်အောက်ပိုင်းအတွက် ဒါမျိုးပြင်ဆင်ထားပါတယ် ဆိုတာမျိုး..။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းပြခဲ့ပြီးမှ စီမံကိန်းကြီးကို(ပြည်သူတွေသဘော
စီမံကိန်းကြီးကို လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အနေနဲ့
စာချုပ်ပါအချက်များအတိုင်း တည်ဆောက်မှု့ ရှိ မရှိ အနီးကပ် ကြည့်ရှု့ အကဲဖြတ် ပေးနိုင်ပြီး
တိုင်းပြည်ကြီး အတွက် အကျိုးများ မနိုင်ပေဘူးလား လို့
ခုမှ (စီမံကိန်းနားပစ်မှ)ဒီလိုတွေ ထွက်လာတာဟာ
မှုမှန်တဲ့ စီမံကိန်းကြီးတော့ ဖြစ်မယ်လို့ မယူ ဆနိုင်ကြောင်း…။
နိုင်ငံရေးစနစ်လမ်းကြောင်း မတူညီသည့် အခြေအနေအရ
တရုတ်အစိုးရ အနေ နှင့် တရုတ်ပြည်သူ များကို စီမံကိန်း
ကို အသိပေးရန်မလိုအပ်သည့်နိုင်ငံရေးစနစ် ဖြစ်သော်လည်း
မြန်မာအစိုးရစနစ်အရ ပြည်သူသို့ ချပြရမည့် စနစ်ကို
လစ်လျု ရှု့ပြီး လက်ဝါးချင်းရိုက်သကဲ့သို့ လုပ်ထည့်လိုက်
သည်ဟု မြင်ပါကြောင်း…… ။
လက်ပံတောင်း တောင် ကြေနီ စီမံကိန်း ၏ ငွေကြေး
စီမံပုံစာချုပ်များ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ထွက်ရှိလာသော
ကြေး များ အရေအတွက် စသည်တို့ကို ပြည်သူများ
သိစေရန် ပြောပြနိုင် ရှင်းပြနိုင်လျှင်
အဆိုပါ ကြေးနီ စီမံကိန်းနှင် ယှဉ်၍ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို
မြန်မာပြည်သူများ အလွယ်တကူ စဉ်းစားသိသာနိုင်စေမည် ဟု ထင်မြင်ပါကြောင်း…။
အလွယ်တကူဖတ်နိုင်ရန် မာတိကာ 0
Myitsone, လွမ်းပိုင်, ခလိန်း တျောက်ပါ and 352K others